छोटकरीमा : आज- २०७७ पौष १४, मंगलबार
आज प्रचण्ड–नेपाल समूहको ओलीमाथि आरोपका वर्षा, भुक्तानी माग्दै आन्दोलनरत एकजना उखु किसानको हृदयघातले निधन, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा संसदीय दलका उपनेता र सचेतक पदमुक्त, नयाँ वर्षलाई ‘उपचारात्मक वर्ष’ बनाउन राष्ट्रसंघको आह्वान लगायतका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले आज शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। ६ प्रदेशमा जिल्ला जिल्लामा प्रदर्शन गरेको यो समूहले वाग्मती प्रदेशमा भने राजधानीमा मात्र प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संगठित रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन्।
संसद विघटनविरुद्ध प्रचण्ड-माधव समूहको शक्ति प्रदर्शन
प्रचण्ड–नेपाल समूहको ओलीमाथि आरोपका वर्षा !
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नरहने दाबी गरेका छन्। उनले ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेर इतिहासमा कलंकको टीका लगाएको बताएका छन्।
केपी ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेर इतिहासमा कलंकको टीका लगाए : दाहाल
वैशाखपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदैनन् : प्रचण्ड
केपी ओली बयल गाडा सिद्धान्तमा नै हुनुहुन्छ भन्‍ने देखियो : दाहाल
नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निरंकुश बाटो समातेका केपी ओली र उनकाे प्रवृत्तिको आयु पुगेको बताएका छन्। ओलीले जनताले बनाएको संविधान कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको नेपालको टिप्पणी उनकाे थियो।
केपी ओलीको निरंकुश प्रवृत्तिको अन्त्य : नेपाल
यो सरकार कामचलाउ भइसक्यो : माधव नेपाल
नेकपा (दहाल–नेपाल) पक्षधर नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने भ्रम पलाएको बताएका छन्। उनले विगतका कठोर निरंकुशताहरूलाई जनताले बडारेर फालेका बेला ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएका ओलीलाई आफ्नो निरंकुशता चल्ला भन्ने कस्तो भ्रम पलाएको होला भन्ने प्रश्‍न गरेका छन्।
ओलीलाई म नै राज्य हुँ भन्‍ने भ्रम छ : भीम रावल
नेकपा (दाहाल–नेपाल) पक्षका नेता घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम लामो समयसम्म नटिक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाई मत दिएर संविधान रक्षाको लागि पठाएको तर तानाशाही तरिकाले संविधान माथि बर्खिलाप गरेको भुसालले जनाएका छन्।
ओलीको असंवैधानिक कदम लामो समय टिक्दैन : भुसाल
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षको कार्यकाल खेर फालेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वलाई चकित पार्ने काम गरेको दाबी गर्ने गरेको तर जनतामा त्यसको प्रभाव नपरेको भन्दै उनले तीन बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पुँजीवादी ल्याएको र त्यसले जनताको दैनिक जीवनमा कुनै प्रभाव नपारेको भन्दै खनालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
ओलीले तीन वर्ष खेर फाले : खनाल
भारतीय प्रतिनिधिसँगको वार्तामा चुच्चे नक्सा टेबलमुनि राखेर ओलीले नक्कली राष्ट्रवाद देखाए : नेता पाण्डे
केपी ओली अब कमरेड रहनुभएन, सर्वसत्तावादी शासक बन्नुभयो : नेतृ शाक्य
उखुको भुक्तानी माग गर्दै काठमाडौंको माइतीरमा आन्दोलनरत सलार्हीका किसान नारायण राय यादवको हृदयघातका कारण निधन भएको छ। ६४ वर्षीय यादवको मगलबार गंगालाल अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो।
भुक्तानी माग्दै आन्दोलनरत उखु किसानको हृदयघातले निधन
सदरमुकामस्थित चाइनिजधारामा रहेको मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा नेकपाका दुवै समूहले आ-आफ्नो दाबी गर्दा विवाद भएको छ। पार्टी कार्यालयभित्रै रहेका ओली समूहका कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षण चलिरहेको बेला दाहाल–नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता र्‍यालीको तयारीका लागि कार्यालय प्रवेश गर्न खोज्दा विवाद भएको हो।
नेकपाको गोरखा पार्टी कार्यालय भवनमा दुवै समूहको दाबी
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता र सचेतकलाई पदमुक्त गरेका छन्। आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदको नेतृत्व गरेका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेल र सचेतक बुद्धिमान पदमुक्त गर्दै स्पष्टिकरण सोधेका हुन्।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा संसदीय दलका उपनेता र सचेतक पदमुक्त
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट बाहिर निस्केको मकुना हात्तीले फेरि अर्का स्थानीय बासिन्दाको ज्यान लिएको छ। मकुनाले कोशी गाउँपालिका–५ श्रीपुर बस्ने २७ वर्षीय मोतीलाल कामतको सोमबार साँझतिर ज्यान लिएपनि शव भने मंगलबार बिहान सोही गाउँपालिकाको वडा ४ कोशीकटान क्षेत्रमा फेला परेका थियो।
उपचारपछि ‘शान्त’ भएको भनिएको मकुनाले फेरि एकको ज्यान लियो
तमु (गुरुङ) समुदायले तमु ल्होसार सीमित व्यक्तिमाझ मनाउने भएका छन्। यो चाड हरेक पुस १५ गते मनाउँदछन् । यो पटक मुसा वर्गको बिदाइ र नयाँ वर्ग गाईको स्वागत गर्दैछन्। तमु ह्यल छोंजधि (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्) मातहतमा दर्जनौं संस्थाको सहभागितामा टुँडिखेलमा बृहत सांस्कृतिक प्रदर्शनी गर्ने गरिन्थ्यो।
यसपटक तमु ल्होसार घरघरमै मनाइने
आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिवलको पहिलो दिनको प्रारम्भिक सत्रमा मदन पुरस्कार विजेता पुस्तकका लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँसँग अन्तरक्रिया गरिएकाे छ। पत्रकार राजकुमार बानियाँसँगको अन्तरसंवादमा लेखक चन्द्रप्रकाशले ‘मदन पुरस्कार पाएपछि विभिन्न संस्थाहरूले छलफलको आयोजना गरेको बताए। तथापि पोखराले अझै पनि आफूलाई नचिनेको र आफू गुमनाम नै रहेको’ उनकाे दुखेसाे छ।
‘महारानी’का लेखक चन्द्रप्रकाश भन्छन्— लेखकस्वबाट एक छाक भात खाएको छैन
कोरोना भाइरसका कारण संकटग्रस्त मुलुकहरूलाई नयाँ वर्ष सन् २०२१ लाई ‘उपचारात्मक वर्ष’ बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको छ। सन् २०२० भरि कोरोना भाइरसको महामारी चलेकाले सन् २०२१ मा यो महामारीबाट मुक्त भइसक्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
भारतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेटिएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बेलायतबाट फर्किएका ६ जनामा कोरोना भाइरस देखिएको पुष्टि गरेको हो।
भारतमा पनि देखियो नयाँ स्वरूपको कोरोना
कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन ‘स्पुतनिक भी’ प्रयोग गर्ने देशमा बेलारुस दोस्रो बनेको छ। यो भ्याक्सिन यसअघि रुसले प्रयोग गरेको थियो। यो भ्याक्सिनको विकास रसियाको सरकारी निकायले गरेको हो।
कोरोना भ्याक्सिन : स्पुतनिक भी प्रयोग गर्ने दोस्रो देश बन्यो बेलारुस
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का प्रमुख टेड्रोस अधनोम गेब्राएसेसले आफ्नो जन्मभूमि इथियोपियामा जारी द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का साथसाथै आफ्नो देशमा जारी द्वन्द्वले उब्जिएको समस्याबाट यस वर्ष आफू निकै दुःखी भएको बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोसले भने– मेरो देश इथियोपिया समस्यामा छ
संसदलाई कोरोना खोप : योगेश र ईश्वर पोख्रेलको भेट, तर एक अर्कासँग बोल्दै बोलेनन्!
प्रतिनिधिसभाको बैठक नजिकिँदै गर्दा संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई कोरोनाविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड भ्याक्सिन’ लगाइदिन सुरु गरेको छ । जहाँ एउटा रमाइलो दृश्य देखियो, नेकपा प्रचण्ड नेपाल खेमाका नेता योगेश भट्टराई र बहालवाला उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलबीचको भेट। तर २० मिनेटको अवधि दुवै एक-अर्कासँग बोलेनन्।
छोटकरी सम्पादक 10 घण्टा पहिले
प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा, ओली र प्रचण्ड समूह आमुनेसामुने हुँदै
पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २३ गते आइतबार बस्दैछ । पुस ५ गतेदेखि नै आमने सामने हुन नसकेका नेकपाका दुई अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आइतबार नै संसद् सचिवालयमा आमने सामने हुने देखिएको छ । त्यो दृश्य कस्तो हुनेछ, आउनुहोस् जानौं ।
यी हुन् नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित ७ जनालाई कारबाही गरेको छ। बैठकले ओलीलले राजीनामा नदिएकोमा निन्दा समेत गरेको छ। थप केके निर्णय भए, आउनुहोस् जानौं।
सभापति देउवाले भने- "चित्त ठूलो राख्नुस् रामचन्द्रजी, सबैले तपाईंको चित्त सानो छ भन्छन्।'
छोटकरी सम्पादक 11 घण्टा पहिले
पेट्रोलियममा मूल्यवृद्धिविरुद्ध विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन
पेट्रोलियममा गरिएको मूल्यवृद्धिविरुद्ध विद्यार्थीहरूले नेपाल आयल निगमअगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यार्थीहरूले बढाइएको मूल्य तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले बढाइएको छ ।
‘जनकपुर साहित्य महोत्सव’ सुरु हुँदै
जनकपुरधामको ऐतिहासिकता पौराणिकतालाई प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले ४ दिवसीय (फागुन १९ देखि फागुन २२ सम्म) जनकपुर साहित्य महोत्सवको आयोजना हुन भएको छ। के-कस्ता सेसनहरू रहनेछन् ? को-को रहनेछन् वक्ताहरू ? आउनुहोस्, जानौं ।
सल्यानटारमा डोजरको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु, स्थानीयले गरे डोजरमा आगजनी
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका- १ सल्यानटार खोल्सी नजिक डोजरले ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। घटनास्थलमा रहेका स्थानीय बासीन्दाका अनुसार डोजरको ठक्करपछि घाइते भएकी महिलालाइ जिउदै अवस्थामा डोजरले माटो खनेर पुरिदिएको भन्दै डोजरमाथि आगजानी गरेका छन्।